ဒူးခြားမှက်တန်း Special | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဒူးခြားမှက်တန်း Special
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 1, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News |9comments
သာသနာရေး အကျန်ပေး ဦးအံ့မောင်အား နေပြည်ဒေါ်ခေါ်ယူ စစ်ဆေးသည်ဆိုခြင်း မဟုတ်မှန်ဘဲ ၎င်းအား သေမြီဆိုးသောကြောင့် ဆေးစစ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း စောက်စုတ်စား (စစစ)အဖွဲ့ဂျီးမှ ကြေငြာသည်။
အဖော်အချွတ်ပို့စ်များဖြင့် နာမည်ကြီးလာသူ ဘေဘီမောင်က အပြာဆန်ဆန်ဇာတ်ကားများ ရိုက်ရန်ငယ်သေး ပြောဆိုလိုက်ပြီး သူ့အနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ဒိုက်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေဂျောင်း ဦးဗလက်ထံမှ သိရသည်။
တရုတ်-မြန်တျန့် ဆံဆက်ရေး တိုးမြှင့်ရန် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု နှာထရုံးများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဂျင်းထဲ့ ကြေးအိုးနှင့် ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းက လူထုအတွက် အကျိုးရှိမြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ်မကြိုက်သူများအဖွဲ့ မှဝေဖန်လိုက်သည်။
တရုတ်ကားပြသည်ကို အားပါးတရ မှတ်တမ်းတင်နေသော မြန်တျန့်စစ်ဗိုလ်ဂျုတ်ကြီး
ကျဆုံးတပ်မဒေါ်သား လျော်ကြေးပေးငွေမှာ ဂျီနီဖာလိုးပက်ဇ် တင်ပါးတဖက် အာမခံဂျေးတန်ဖိုး တဝက်ပင် မရှိဟု ၎င်းပြောဆိုဂျက်မှာ စော်ဂါးခြင်းဟုတ်ဖဲ လထုဂျီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ဇေယံ၊ လတ်ယားလတ်ယား ကာလသားများ တအားချလိုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်စေရန် ပုံဆောင်ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဟု ကျန်ဖွတ် လွှတ်တော်အမတ် ဥလှဆေးမှ ဖြေရှင်းသည်။
ယူအက်စ်-မြန်ကျန့် စစ်တပ်ခြင်း ဆက်ဆံရေးမှ ရလဒ်အဖြစ် တပ်မဒေါ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရာ အမြောက်တပ်မှ ဗီယာဂရာ ကာမအားတိုးဆေးဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တင်ကားတပ်တွင် ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်များ ဝတ်ဆင်ထားဂါ စစ်တီးဝိုင်းတွင် ဘာဂျာမှုတ်နည်း လေ့ကျင့်နေသည်။
ဆင်စီးခြင်းမှာ ယတြာခြေဂျင်း မဟုတ်ဖဲ ဓာတ်ဆီခြွေတာပြခြင်းဟု ဂွေဂဗာသထေးဂျီး ဥခွင်ရှည် စင်ပေါ်မှနေ၍ ပြောဆိုလိုက်ပြီး ၎င်းစင်ပေါ်တက် မေးလာသူများကို ငါ့ဆင်ပေါ် မတက်နဲ့ဟု တွန်းထုတ်ရာ သဒင်းထောက် အများအပြား ဒံယာရသွားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝံဂျီးချုပ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မှောင်ကျုံးအား ခန့်အပ်လိုက်ရာ ဒီမိုဘွားဒေါ်ဂျီးကိုပင် ဆန့်ကျင် ပြောဆိုရဲသူ ရခိုင်မျိုးခြစ်များ ဒီတချီ အသံမထွက်ရဲ ကြိတ်ခံနေဂျောင်း သုံးသပ်နေဂျသည်။
သမဒဦးသိန်းဂိန် တရုတ်ပြည်သို့ လေးဖက်ထောက်သွားပြီး ဖင်ပွတ်ပြန်လာရသည် ဆိုဂျင်းကို သမဒရုံးမှ ပယ်ချလိုက်ပြီး ၎င်းတို့ကသာ ဘယ်ဗျံညာပျံ တီးဂဲ့ကြောင်း ပေကျင်းရှိ ပန်းသေးလဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သမဒဂျီး နံပြားရိုက်နေဗုံဖြင့် သဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သီ။
ပုပ်မ၄၃၆ပြင်ရန် လက်မှတ်၃သန်းကျော် ရထားဂျောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပြောဆိုချက်ကို ကြောက်ဖွတ်အုတ်ကထ ဦးဂွေးဥမှ အကြီးမားဆုံး ဟာသဟု ရယ်သွမ်းလိုက်ပြီး ကျန်ကြောက်ဖွတ်အမတ်အပေါင်းမှ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ လိုက်လံရယ်မောဂျရာ အားလုံး အူအတက်ပေါက် ဆေးရုံရောက်သွားပြီး အလွန်စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေ ရှိသဖြင့် မကြာခင် မြန်တျန့်ပြည်ဂျီး စစ်ဖိနပ်အောက်မှ လွတ်မျောက်ဖွယ် ရှိသည်။
သာသနာ့ အကျန်စား ဦးအံ့မောင်အား ကြောင်ဟီး အမွေဖတ် –
ဘေဘီမောင် အူကြောင်ကြောင် ထိုင်ထ လေ့ကျင့်သယောင် –
၀က်သားဒုတ်ထိုး မကြိုက် လူမိုက် –
သပ်ပလုံးစုံ အားလုံးခြုံ –
စစ်ဖိနပ်အောက်ရောက် တရားခံ ကြောင်ဟီးပါ –
တမဒဂျီး တျုတ်ပီ တွားဒါ ဆီပုလင်း ခါးချိတ်တွားတယ် တို့ ဘာတို့။
ကျုပ်ကတော့ အူအတက်ပေါက်မှာစိုးလို့ ဖြေးဖြေးရယ်ပါတယ်….
ခုတလောပောာ့ဖစ်နေဒဲ့ အောင်ယင်ညိန်း ဒဒင်းလဲမပါဝူး
ဘေဘီမောင် နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့
ဘေဘီမောင်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ယုံထင် ကြောင်ထင် ဖြစ်နေဦးမယ်ဗျာ…။
ဒဒင်းကိုစုံသွားတာပဲ။ ရီလိုက်ရတာ အမှန်တွေချည်းပဲဟယ်။ နောက်ဆုံးဒဒင်းလေးတော့ ဖြစ်မလားမျှော်မိ သား
မာချလော – မာချလော — ဟင်း နော် – –
fb မာချလော – ခေတ်စားနေ –